Cumar Cabdirashiid oo R/W Rooble usoo jeediyey arrin la xiriirta dilka IKRAAN Tahliil - Caasimada Online
Home Warar Cumar Cabdirashiid oo R/W Rooble usoo jeediyey arrin la xiriirta dilka IKRAAN...
Cumar Cabdirashiid oo R/W Rooble usoo jeediyey arrin la xiriirta dilka IKRAAN Tahliil
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa ka hadlay warkii Xalay kasoo baxay Hey’adda Nabad-Sugidda Qaranka ee NISA ee ahaa in Ikraan Tahliil ay ku baxday gacanta Ururka Al-Shabaab.
NISA ayaa xalay qoraal lagu baahiyey warbaahinta dowladda ku tiri “HSNQ dabagal ay samaysay oo muddo socday kadib, ayaa lagu helay warbixin mujinaysa in ay u gacan gashay argagixisada arxan laawayaasha ah ee Al-Shabaab, kadibna ay dileen.”
Cumar Cabdirashiid ayaa ku baaqay in la magacaabo guddi baaritaan oo ka sal-gaara dilkii loo geystay Ikraan Tahliil Faarax.
“Waa war aad looga naxo inaan maqalnay dilka Ikram Tahliil. Allah ha u naxariisto oo ha siiyo Jannah fardowsa,” ayuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray Cumar Cabdirashiid.
“Waxaa lagama maarmaan ah in Ra’isul Wasaaruhu, isagoo tixgalinayaa kiiskan inuu magacaabo guddi ay ku jiraan dhammaan hay’adaha ku shaqada leh, loona xiksaaro inay ka gungaaraan xaqiiqada dhabta ah ee arrintan daahsoon,” ayuu sii raaciyey.
Hooyo Qaali Maxamuud Guhaad ayaa ku gacan seertay warka kasoo yeeray hay’adda sirdoonka qaranka ee NISA ee ah in kooxda Al-Shabaab ay dileen gabadheeda Ikraan Tahliil Faarax, oo la la’aa tan iyo 26-kii June.
Ikraan waxay bishii August ee sanadkii 1996-kii ku dhalatay magaalada Muqdisho. Waxay ka mid tahay dhallinyarada dibadda wax kusoo bartay kaddibna dalka dib ugu soo laabtay, waxayna khibrad in muddo ah u lahayd shaqooyinka xafiisyada dowladda iyo laamaha amniga.
Markii ugu horreysay ee ay NISA ku biirtay waxay ahayd sanadkii 2017-kii, sida uu warbaahinta u sheegay taliyihii hore ee sirdoonka Soomaaliya, Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe.